Wararka - Sidee loo doortaa burush rinjiyeyn leh oo loogu talagalay kuwa bilowga ah?
Rinjiga Rinjiga looxa
Burushka Rinjiga Faahfaahinta Fine ah
Rinjiga Rinjiga Saliida
Rinjiga Rinjiga Biyaha
Burush Kolinsky ciddiyaha
Sidee loo doortaa burush rinjiyeyn ah oo loogu talagalay bilowga?
Noocyada burush rinji ee ugu da'da yar ee aan inta badan u isticmaalno rinjiyeynta waa sida soo socota: Nooca ugu horreeya waa fiyuusta dabiiciga ah, oo ah bristles. Oo ay ku jiraan bristles, timaha yey, timaha mink iyo wixii la mid ah. Qaybta labaad waa faybar kiimiko ah. Waxaan badanaa isticmaalnaa naylon.
Burushka rinjiyeynta cusub ee artiest ayaa loo iibsaday in lagu sameeyo wax soo saar fudud. Hadday tahay burush rinji dabiici ah oo dabiici ah, qaar baa lagu dhajiyaa. Burushka rinjiga noocan ah waxaa lagu qooyn karaa biyo diiran 15 daqiiqo ka dibna si tartiib ah loo xoqi karaa. Ka dib marka timaha burushka la dabciyo, ku nadiifi xabagta haray biyo nadiif ah. Haddii burushka aan la dhajin, dabcan si toos ah ayaa loo isticmaali karaa, laakiin waxaa ugu wanaagsan in lagu luqluqo biyo si looga saaro timaha sabeynaya burushka. Burush rinjiyeynta artiest artiest dabiiciga ah waxaa ka mid ah fiilooyinka wanaagsan sida timaha mink, timaha yey, iwm, iyo sidoo kale burushyada fiberka qaro weyn sida bristles.
Xadhigaha burushka ee fiilooyinka kiimikada badanaa wey khafiifsan yihiin, dabacsanaantoodu si weyn ayey u kala duwan tahay iyadoo ku xiran nooca. Si kastaba ha noqotee, nuugista inta badan maahan mid ku habboon, waxayna ku habboon tahay qaabeynta qaab wanaagsan. Xulashada burushku waxay ku saleysan yihiin baahiyaha shaqsiga iyo xirfadiisa gaarka ah.
Burushka rinjiga-qafiifka ah ee cufan-jilicsan ayaa leh dabacsanaan wanaagsan, iyo burushyada burushka ee bristle waa iska cadahay, taas oo sahleysa isku soo ururinta midabyo si loo abuuro saameyn muuqaal ah. Burushka bristle ma ku habboon yahay codsi soo noqnoqda. Sababtoo ah dabacsanaanteeda xoogan, waa mid aad khatar u ah in si isdaba joog ah loo mariyo lakabka rinjiga ee aan weli qallajin. Gaar ahaan marka lakabka midabka hoose uu aad u dhuuban yahay, iyadoo la kaashanayo dareeraha dhexdhexaadka ah, way fududahay in la xoqo lakabka midabka hoose oo la soo bandhigo gunta sawirka.
Burushka rinjiyeynta Kolinsky
Burushyada sida timaha kolinsky iyo yeydu waxay leeyihiin wax soo saar fiican mana u nugul istaroog muuqda. Way fududahay in la isku xiro waxayna ku habboon yihiin sawiridda sawirro dhaqameed jilicsan oo jilicsan. Burushyadani waxay aad ugu habboon yihiin dalabka khafiifka ah sababtoo ah dabacsanaanta daciifka ah laakiin nuugista aadka u fiican. Gaar ahaan burushyada nayloon ee daboolan-baalasha weyn leh waxay leeyihiin dabacsanaan aad u fiican waxayna soo jiidan karaan xoogaa xoogaa karbaash ah oo nadiif ah oo ku saabsan geeddi-socodka muujinta wanaagsan
Cinwaanka: No.1 Aixihu South Wadada Qingshanhu Degmada Nanchang City Jiangxi Provience, 330095